कुकुरले टोक्नसाथ के गर्ने ? यस्तो पाँच तरिका - राेल्पा न्युज
राेल्पा न्युज calendar_today २ माघ २०७६, 10:28 am
सर्तकता अपनाउँदा-अपनाउँदै पनि कुकुरले टोक्न सक्छ । कुकुरले टोक्यो भने के गर्ने ? तत्काल हामी केहि सोच्न सक्दैनौ । कुकुरको टोकाइबाट रेबिजको संक्रमण हुन सक्छ । यसले ठूलो समस्या समेत निम्त्याउन सक्छ । कतिको मृत्यु समेत हुन सक्छ ।
रेबिज एक भाइरस हो, जो कुकुर, बिरालो, भालु जस्ता जनवारमा पाइन्छ । यदि यो भाइरस भएको जनवारले कुनै व्यक्तिलाई टोक्यो भने जनवारको र्‍यालबाट उक्त भाइरस शरीरमा प्रवेश गर्छ । यो भाइरसले एकदमै तिब्र रुपमा स्नायु प्रणालीमा आक्रमण गर्छ । र, यो मृत्युको कारण समेत बन्न सक्छ ।
त्यसैले कुकुरले टोक्नसाथ तुरुन्तै चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ र एन्टि रेबिज इन्जेक्सन लगाउनुपर्छ । कुकुरले टोक्नसाथ के गर्ने त ?
१. पानीले सफा गर्ने
जुन ठाँउमा कुकुरले टोकेको छ, त्यसमा सफा पानीले धुनुपर्छ । यसले गर्दा घाउमा ब्याक्टेरिया लाग्ने खतरा कम हुन्छ ।
२. घाउलाई दबाउन हुन्न
यदि घाउबाट रगत बाहिर आउँदैछ भने त्यसलाई दबाउनु हुन्न । केहि समयसम्म रगत बग्न दिनुपर्छ ।
३. एन्टिबायोटिक क्रिम लगाउने
टोकेको ठाउँमा पानीले सफा गरेपछि एन्टिबायोटिक क्रिम लगाउनु पर्छ । यसले इन्फेक्सन पुरै शरीरमा फैलाउन पाउँदैन ।
४. ब्यान्डिज लगाउने
घाउमा ब्यान्डिज लगाउने । यसले वातावरणमा रसहेको ब्याक्टेरिया घाउसम्म पुग्न पाउँदैन ।
५. एन्टि रेबिज इन्जेक्सन लगाउने
यसको प्राथमिक उपचारपछि तुरुन्तै चिकित्सकको सल्लाह अनुसार एन्टी रेबिज इन्जेक्सन लगाउने ।